အဆိုပါ Vimalakirti န္တာန်တိ - တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
အဆိုပါ Vimalakirti န္တာန်တိ
နှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသော၏တရားဓမ္မ-တံခါး
အဆိုပါ Vimalakirti Nirdesa န္တာန်တိလည်းဖြစ်ကောင်း 2000 နီးပါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရေးသားခဲ့သည့် Vimalakirti န္တာန်တိခေါ်။ သို့သျောလညျးက၎င်း၏လတ်ဆတ်ဟာသအဖြစ်က၎င်း၏ဉာဏ်ပညာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ခေတ်သစ်စာဖတ်သူများအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူရေးနှင့်အပေါ်သင်ခန်းစာတန်ဖိုးထား သစ္စာဉာဏ်အလင်း သဘောသဘာဝကိုဟောကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။
အများဆုံးလိုပဲ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ န္တာန်တိ, စာသား၏မူလလူသိများကြသည်မဟုတ်။ ဒါဟာယေဘုယျအားဖြင့်မူရင်းအဆိုပါ 1st ရာစုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ဦး Sanskrit စာသားကိုချိန်းတွေ့ခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ရသည်။
ပစ္စုပ္ပန်နေ့ရှင်သန်နေဆဲသောရှေးအကျဆုံး version ကို 406 စီအီး Kumarajiva ဖွငျ့တရုတျသို့ဘာသာပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးတိကျမှုဖြစ်စဉ်းစားနောက်ထပ်တရုတ်ဘာသာပြန်ချက်,7ရာစုအတွင်း Hsuan Tsang အားဖြင့်ပြီးစီးခဲ့သည်။ အဆိုပါယခု-ပျောက် Sanskrit မူရင်းကိုလည်း9ရာစုအတွင်း Chos-nyid-tshul-khrims အားဖြင့်အများဆုံးအာဏာပိုင်များ, တိဘကျသို့ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့သည်။
အဆိုပါ Vimalakirti န္တာန်တိအတိုအက်ဆေးအတွက်တင်ပြနိုင်ပါတယ်ထက်လိမ္မာသည် ဖြစ်. ပညာတရားကိုပါဝင်သော်လည်းဒီမှာန္တာန်တိ၏အကျဉ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံဆောင်အလုပ်များတွင် Vimalakirti တပည့်များနှင့် bodhisattvas တစ်အိမ်ရှင်အငွငျးပှားနှင့်သူ၏နက်ရှိုင်းသောသစ္စာဉာဏ်အလင်းနှင့်နားလည်မှုပြသူတစ်ဦး layman ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုသာဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်ကသူ၏ညီမျှသည်။ ဒါကြောင့်န္တာန်တိအတွက်လုပ်ပထမဦးဆုံးအချက်သစ္စာဉာဏ်အလင်းရာ၌ခန့်အပေါ်မူတည်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။
Vimalakirti တစ် Licchavi ရှေးခေတ်အိန္ဒိယအာဏာရမျိုးနွယ်စုများ၏တဦးတည်းဖြစ်ပြီး, သူအားလုံးအားဖြင့်မြင့်မားတဲ့လေးစားတှငျကငျြးပခဲ့သည်။ ဘုံမှနျရှငျဘုရငျကနေလူအတော်များများ, ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းငှါလာကြလိမ့်မယ်လို့ဒါန္တာန်တိ၏ဒုတိယမျြးအခနျးကွီး Vimalakirti နာမကျန်း feigns (သို့မဟုတ်မိမိကိုမိမိသို့နာမကျန်းကြာ) ထိုကရှင်းပြသည်။
သူဟောပြော တရားဓမ္မ လာ, သူ၏ဧည့်သည်အများအပြားသစ္စာဉာဏ်အလင်းနားလည်သဘောပေါက်သောသူတို့အား။
လာမည့်အခန်းများတွင်ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓကသူ၏ပြောပြရှာတွေ့ တပည့် အဖြစ် TRANSCEND bodhisattvas နှင့်နတ်ဘုရားလည်း Vimalakirti တွေ့မြင်သွားပါရန်။ အတိတ်တွင်ထိုလူအပေါင်းတို့သည် Vimalakirti ရဲ့သာလွန်ဥာဏ်တော်အားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သောကြောင့်, ဒါပေမဲ့သူတို့သွားနှင့်ဆင်ခြေအောင်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။
တောင်မှ Manjusri , ပညာ bodhisattva, Vimalakirti အားဖြင့်နှိမ့်ချခံစားရပါတယ်။ သို့သော်သူသည် layman သွားရောက်ကြည့်ရှုသွားကြဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။ Vimalakirti နှင့် Manjusri အကြားစကားပြောဆို incalculably illuminating မည်ဖြစ်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုအခါတပည့်ဗုဒ္ဓ bodhisattvas ဘုရားနှင့်နတ်ဖုရားမှာများစွာသောအိမ်ရှင်သက်သေခံဖို့တလျှောက်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်။
အောက်ပါအတိုင်းသောဇာတ်ကြောင်းခုနှစ်, Vimalakirti ရဲ့ဖျားနာတဲ့အခန်းကိုသူတို့ကူးလွတ်မြောက်မှုကို၏လက်နက်ဖြစ်၏ဘုံသို့ ဝင်. ဖူးညွှန်း, ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရမှရောက်လာသောသူမရေမတွက်နိုင်သောသတ္တဝါအတွက်ယူချဲ့ထွင်။ သူတို့စကားပြောဆိုရန်မရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့်, Vimalakirti Vimalakirti သူတို့ရဲ့နားလည်မှုစိန်ခေါ်သူတို့ကိုညွှန်ကြားချက်ပေးသောအတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသို့ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်များနှင့်အခြားဧည့်သည်များထားပါတယ်။
ဤအတောအတွင်းဗုဒ္ဓဥယျာဉ်၌ဆုံးမဩဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဥယျာဉ်ကိုချဲ့ထွင်လျက်, layman Vimalakirti ဧည့်သည်သူ၏အိမ်ရှင်နှင့်အတူပေါ်လာသည်။ ဗုဒ္ဓညွှန်ကြားချက်သူ၏ကိုယ်ပိုင်စကားထပ်ပြောသည်။ အဆိုပါန္တာန်တိ၏ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုဖွငျ့နိဂုံးခြုပျ ဗုဒ္ဓ Akshobhya နှင့်ဠာ Abhirati နှင့်တစ်ဦးဗားရှင်းလည်းပါဝင်သည်တစ်ခု epilogue လေး Reliance ။
သင်တဦးတည်းစကားလုံးအတွက် Vimalakirti ၏အဓိကသင်ကြားမှုအနှစ်ချုပ်ခဲ့ပါလျှင်, ထိုစကားလုံးက "နှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသော။ " ဖြစ်စေခြင်းငှါ, နှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသောမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာမှအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောနက်သင်ကြားမှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Vimalakirti ၏အခနျး 9, "နှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသော၏တရားဓမ္မ-တံခါး," ဖြစ်နိုင်သည်န္တာန်တိ၏အကောင်းဆုံးလူသိများအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခနျးတှငျ, Vimalakirti တရားဓမ္မ-တံခါးကိုရိုက်ထည့်ဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြဖို့ TRANSCEND bodhisattvas ၏အုပ်စုတစုကိုစိန်ခေါ်။ အခြားပြီးနောက်တစ်ဦးကသူတို့ဒွိဝါဒနှင့်နှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသောဥပမာပေးပါ။ (စာမျက်နှာ 74, ရောဘတ် Thurman ဘာသာပြန်ချက်မှ) ဥပမာ:
အဆိုပါ bodhisattva Parigudha ထို့ကြောင့်မိမိတို့၏သဘာဝ၏ရူပါရုံ၏နှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသောနှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသောသို့ဝင်ပေါက်ဖြစ်သနည်း '' ကြိုး '' ကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့ရှိပါတယ်ဘာမိမိကိုယ်ကို၏တည်ရှိမှုကိုရိပ်မိလို့မရနိုင်ပါကတည်းက '' ကိုယ်ပိုင် 'နဲ့' ကြိုး '' ။ နှစ်ခုကွဲပြားမှုကိုပယ်ဖြစ်ကြောင်း "ကြေညာ ။ "
Vidyuddeva '' အသိပညာ 'နဲ့' အဝိဇ္ဇာ '' နှစ်ခုကွဲပြားမှုကိုပယ်ဖြစ်ကြောင်း "ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဝိဇ္ဇာနှင့်အသိပညာ၏သဘောသဘာဝအဝိဇ္ဇာအဘို့, တူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါ bodhisattva, undefined incalculable နှင့်အတွေးများ၏နယ်ပယ်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအများ၏သဘောပေါက်နှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသောသို့ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ "
အခြားအပြီးတဦးတည်း, ထို bodhisattvas နှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသောသူတို့၏နားလည်မှုအချင်းချင်း outdo ငှါရှာကြံကြ၏။ Manjusri အားလုံးကောင်းစွာဟောပွောသောမိန့်တော်မူ၏, ဒါပေမယ့်ပင်နှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသောသူတို့၏ဥပမာနှစ်ခုကွဲပြားမှုကိုပယ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ Manjusri နှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသောသို့ဝင်ပေါက်အပေါ်သူ၏သင်ကြားမှုကမ်းလှမ်းရန် Vimalakirti ကမေးတယ်။
Sariputra အသံတိတ်ဖြစ်နေဆဲနှင့် Manjusri ပြောပါတယ်, "Excellent က! Excellent က, မြင့်မြတ်သောဆရာ! ဒါကအမှန်တကယ် bodhisattvas ၏နှစ်ခု ဟူ. ကွဲပြားခြင်းမရှိသောသို့ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ syllables, အသံများနှင့်စိတ်ကူးများအဘို့အဘယ်သူမျှမသုံးစွဲခြင်းလည်းမရှိ။ "
အခန်း7တွင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကျမ်းပိုဒ်များတွင်တပည့် Sariputra သူမရဲ့အမျိုးသမီးပြည်နယ်ထဲကအသွင်ပြောင်းပါဘူးအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးဉာဏ်အလင်းနတ်သမီးကမေးတယ်။ ဒီအမြိုးသမီးမြားကိုသူတို့ရိုက်ထည့်မတိုင်မီယောက်ျားဖြစ်လာမှအသွင်ပြောင်းရမယ်တဲ့ဘုံယုံကြည်ချက်တစ်ခုရည်ညွှန်းဖြစ်နိုင်သည် Nirvana ။
အဆိုပါနတ်ဘုရားမ "အမျိုးသမီးပြည်နယ်" မမွေးရာပါဖြစ်တည်မှုရှိကြောင်းတုံ့ပြန်။ သူမကမိမိအယူဆနေချိန်တွင်ထိုအခါသူမကဥသုံ, သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ယူဆ Sariputra ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါဟာအတွင်းကျားမအသွင်ပြောင်းဆင်တူတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုရဲ့ ဗာဂျီးနီးယား Woolf 's အမျိုးသမီးဝတ္ထု Orlando တွင်ပေမယ့်အစောပိုင်းကနှစ်ခုနီးပါးထောင်စုနှစ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်။
အဆိုပါနတ်ဘုရားသည်သူ၏အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်မှအသွင်ပြောင်းဖို့ Sariputra စိန်ခေါ်နှင့် Sariputra အသွင်ပြောင်းဖို့ဘာမှမရှိဘူးဖွကွေား။ အဆိုပါနတ်ဘုရားတုံ့ပြန် "စိတျ၌ဤအတူ, ဗုဒ္ဓ '' မယောက်ျားမရှိ, မိန်းမလည်းမရှိ, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုခုနှစ်တွင် 'ဟုဆိုခဲ့သည်။ "
ရောဘတ် Thurman, Vimalakirti ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားသွန်သင်: တစ်ဦးကမဟာယာနကျမ်းစာလာ (Pennsylvania ပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း, 1976) ။ ဒါဟာတိဘက်ထံမှအလွန်ဖတ်လို့ရအောင်ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Burton Watson က The Vimalakirti န္တာန်တိ (ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း, 2000) ။
Watson ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်း၏အများဆုံးလေးစားဖွယ်ဘာသာပြန်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိမိအ Vimalakirti အဆိုပါ Kumarajiva တရုတ်စာသားကိုကနေဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။
Read more: ဗုဒ္ဓဘာသာကမျြးစာကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Unitarian Universalists အဘယ်အရာကိုယုံသလား?
တစ်ဦးဖြည့်စွက်ထားသကဲ့သို့ bovine Colostrum မှတစ်ဦးကလမ်းညွှန်
မာတာ Sahib Kaur (1681 - 1747)
စိန့်သြဂတ်စကားအဘယ်သူခဲ့သလား - အတ္ထုပတ္တိကိုယ်ရေးဖိုင်
မဟာ Pajapati နှင့်ပထမဦးစွာသီလရှင်
ယူနိုက်တက်ပင်တေကုတ္တေ၏ကြိုးနှံနှင့် Dress စည်းကမ်းများ
လူ့အရေပြားပေါ် Blaschko ရဲ့လိုင်းနှင့်မမြင်နိုင်သောအစင်းကျား
Henrietta ကင်းမဲ့အကြောင်း5အများစုမှာအံ့သြစရာအချက်အလက်
အဆိုပါ Marne ၏ပထမဦးဆုံးတိုက်ပွဲ
Factor Tree သင်ထောက်ကူ
ဒင်္ဂါးပြား၏ Mohs ခွန်အားဖြစ်
ကို 'Lay Up ကို' 'Shot ရှင်းပြ
ဆရာများအဘို့အစွမ်းဆောင်ရည်အခြေပြု Pay ကို၏အကောင်းအဆိုး cons
Boise ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ဝက်လူ့, ဝက်သားရဲ: ရှေး Times သတင်းစာများ၏ဒဏ္ဍာရီကိန်းဂဏန်းများ
ကို '90 10 အကောင်းဆုံးတီဗီဟာသများ
Plus အား Size ကိုနှင်းလျှောစီး Wear
ဘားရက်အိုဘားမားရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ 2004 ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဗင်းရှင်းခွန်း
လှူဒါန်းမှုနှင့် Donatists အဘယ်အရာကိုယုံကြည်ခဲ့ကြအဘယ်အရာခဲ့သလား
Que es la salida voluntaria y က cuando puede SER mejor Que deportación